ငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၂) | Great Arakan
Home Education ငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၂)
အယင် အပိုင်း (၁) မှာ မူကြိုက စပနာ ဇာပိုင် တနှစ်ထက်တနှစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလားသင့်ရေဆိုရေ နမူနာကို တင်ပြထားရေခါ၊ အေတခါ သူငယ်တန်းကနီ တက္ကသိုလ်အဆင့်ထိကို ဇာပိုင် ပြောင်းလဲလားသင့်ရေဆိုရေ သဘောတရားကို တင်ပြပီးပါမေ။
ပညာရေး ရည်ရွယ်ချက်က သင်ကြားမှုမှာ ပျော်မွေ့ဖို့အတွက်၊ ကိုယ် စိတ်ပါစွာကို လုပ်နီဖို့အတွက်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်လာအောင် လုပ်ဖို့အတွက် အစရှိပနာ အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကတ်တေအတွက်၊ ဇာပညာရှင်၊ ဇာနိုင်ငံရေးသမားကလည်း တရားသီ အဓိပ္ပာယ်တခုတည်း မဖွင့်နိုင်ပါ။ ယကေလည်း ပညာရေး မူလရည်ရွယ်ချက်စွာ လူတယောက် ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းကို တိုးမြှင့်ဖို့အတွက်လို့ ဆိုကေ မှားဖို့ မထင်ပါ။ ထပ်ပနာ ပိုကောင်း၊ ပိုပြည့်စုံရေ ဘဝတခု ဖြစ်လာဖို့အတွက် အကျိုးရှိနိုင်ရေ အရင်းအမြစ်တခုလို့လည်း ပြောနိုင်ပါရေ။
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတခုမှာ ပညာတတ်တိ များလာလီ၊ ကိုယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တိနန့်၊ ကိုယ့် တာဝန်တိကို ပိုသတိထားမိလာကတ်လီ ဖြစ်တေအတွက်၊ ယင်းလူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ပိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလီ ဖြစ်ဇီနိုင်ပါရေ။ တိုင်းပြည်ဆိုစွာလည်း လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတိ အရောင်စုံနန့် ဖွဲ့စည်းထားစွာရာ ဖြစ်တေအတွက်၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပညာရေးက အဓိက ဖြစ်တေဆိုစွာကို ယုံမှားသံသယဖြစ်စရာ မလိုပါ။
ယကေလည်း နိုင်ငံတခု မဖွံ့ဖြိုး၊ မတိုးတက်သိမ့်ရေ အချိန်မှာ အထက်က ပြောခရေပိုင်၊ ပညာရေးကို သင်ကြားမှုမှာ ပျော်မွေ့ကတ်ဖို့လောက်အတွက်၊ ကိုယ် စိတ်ပါစွာကို လုပ်နီကတ်ဖို့လောက်အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ထားနီလို့ မရပါ။ ဘဝကို အလုပ် တခုခု မလုပ်ရဘဲ၊ မရပ်တည်နိုင်ရေ လူအများစုက၊ အေရည်ရွယ်ချက်တိနန့် ပညာသင်နီကတ်ကေ ယင်းတိုင်းပြည် စစုပ်မြုပ်လားနိုင်ပါရေ။ ဥပမာ – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးကို ကြည့်နိုင်ပါရေ။ တက္ကသိုလ်ဗြီးရေ လူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်စွာ၊ ယင်းဘွဲ့နန့် ဘဝကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် မတည်ဆောက်နိုင်ကတ်တေအတွက်၊ မြန်မာပြည်စွာ မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်လာနိုင်ဘဲ၊ စစုပ်မြုပ်နီဇီစွာပါ။
ရခိုင်ပြည်ကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပညာရေး ရည်ရွယ်ချက်စွာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်လာအောင် လုပ်ဖို့အတွက် ဆိုစွာမျိုးကို အဓိက ဦးတည်သင့်ပါရေ။ ပညာရေး ပြဌာန်းစာတိ အများစုစွာ ဘဝမှာ လက်တွိ အသုံးချနိုင်ရေ လုပ်ရပ်တိအတွက်နန့်၊ လူ့ဘဝမှာ မရှိမဖြစ် သိသင့်ရေ အထွေထွေ ဗဟုသုတတိအတွက်လောက်ရာ ဖြစ်သင့်ပါရေ။
မူလတန်းအဆင့်မှာ ရခိုင်စာ အရွီးအဖတ်၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရွီးအဖတ်၊ အခြေခံ သင်္ချာ၊ အခြေခံ ရူပ၊ အခြေခံ ဓါတု၊ အခြေခံ ဇီဝ၊ အခြေခံ ကွင်ပြုတာ တည်ဆောက်ပုံနန့် ကုဒ်ရွီးပုံ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ တိကိုရာ သင်ကြားပီးလားသင့်ပါရေ။ အလယ်တန်းအဆင့်မှာ မူလတန်းအဆင့် ပြဌာန်းချက်တိကို တဆင့် ထပ်မြင့်ရေအပြင်၊ အခြေခံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ အခြေခံ ကုန်သွယ်ရေး၊ အခြေခံ စျီးကွက်စီးပွားရေး အစရှိစွာတိကို သဘောတရား နားလည်လာအောင် အစပြုသင့်ပါဗျာလ်။ အထက်တန်း ပညာရေးမှာ ကျောင်းသားတယောက်စွာ ကင်ပြုတာ အစိတ်အပိုင်းတိနန့် ကင်ပြုတာတလုံး တပ်ဆင်နိုင်အောင်၊ ကင်ပြုတာ ကုဒ်တိ ရွီးတတ်အောင် သင်ပီးလားရပါဖို့။ ကဗာ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ကဗာ့ ကုန်သွယ်ရေး၊ ကဗာ့ စျီးကွက်စီးပွားရေး အစရှိစွာတိကို နားလည်သဘောပေါက်ဗြီးသား ဖြစ်ရပါဖို့။ ယင်းချင့်အပြင် တက္ကသိုလ်မှာ ဇောင်းပီးလေ့လာဖို့ ဘာသာရပ်အတွက်လည်း၊ ယင်းဘာသာရပ်နန့် ဆက်စပ်စွာတိကို ပိုလေ့လာဗြီးသား ဖြစ်ရပါဖို့။
လန်ဒန်မြို့က ကောလိပ်ကျောင်း တခု ရှိက အပတ်တိုင်း ဖြတ်လားဖြစ်နီရေခါ၊ ကောလိပ်ကျောင်း ရှိဆုံး မျက်နှာစာက အခန်းတခုထဲမှာ မြင်နီရစွာက၊ မမက်တိ အလှပြင်ဆိုင်တိမှာ တွိရရေ၊ ဂေါင်းအုပ် ဆံပင်အပူပီးစက်တိ အများကြီးပါ။ ယင်းကောလိပ်မှာ ဆံပင်အလှပြင် ဘာသာရပ်၊ မိတ်ကပ် ဘာသာရပ်၊ ကားစက်ပြင် ဘာသာရပ်၊ မီဒီယာနန့် အသံ ဘာသာရပ်၊ အိန်ဂျိန်နီယာ ဘာသာရပ်၊ ရီပိုက်ဆက် ဘာသာရပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး အုတ်စီ၊ အချောကိုင် ဘာသာရပ်၊ လျှပ်စစ် တပ်ဆင်ရေး ဘာသာရပ်၊ ဆီးသုတ် ဘာသာရပ်၊ အချေထိန်း ဘာသာရပ်၊ အက ပညာရပ်၊ စင်တင် အနုပညာ ဘာသာရပ်၊ အစရှိစွာတိကို လက်မှတ်အဆင့်ကနီ၊ ဘွဲ့အဆင့်အထိ သင်ပီးနီစွာကို တွိရပါရေ။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတိ အေကျောင်းက ဗြီးစွာနန့်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်သင်ခစွာတိနန့် တန်းပနာ အလုပ် လုပ်နိုင်ကတ်ဖို့ဆိုစွာ ယုံမှား သံသယဖြစ်စရာ မလိုပါ။
ကိုယ့်ဘားက ကောလိပ် ပညာရေး၊ တက္ကသိုလ် ပညာရေးတိကိုလည်း အေသဘောတရားအတိုင်း ပြန်ပနာ တည်ဆောက်သင့်ပါရေ။ မူကြိုပညာရေးက စပနာ ကဗာ့အဆင့် ပညာရှင်တိကို မွီးထုတ်နီရေ အချိန်အတွင်းမှာ၊ လက်ရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတိကိုလည်း၊ အကောင်းဆုံး အမြင့်ဆုံး လိုက်နိုင်ရေ ပညာရေးအဆင့်တခုကိုတော့ မြင့်တင်ပီးလားဖို့ လိုပါရေ။
ပညာရေးကို ပြန်ပနာ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဝလုံးက စပနာ ကိုယ့်စွာကိုယ် ပြန်ရွီးနီဖို့ မလိုပါ။ အပိုင်း (၁) မှာ ပြောခရေပိုင်၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်နိုင်ရေ လူတိနန့်၊ အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံတိက အကောင်းဆုံး ပြဌာန်းစာတိကို ထုတ်နှုတ်ပနာ၊ ကိုယ့်ကျောင်း သင်ခန်းစာတိကို ဖန်တီးယူရုံပါ။ သဘောတရားကို အပိုင်း (၁) မှာ ပို ရှင်းလင်းထားပါရေ။
တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ရေခါ၊ ကျောင်းတွင်း ပညာရေးအပြင်၊ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါဖို့။ ကျောင်းပြင်ပမှာ ရှိနီရေ လူတိအတွက်လည်း လက်တွိ အသုံးချ ပညာရပ်တိကို အထက်က လန်ဒန်ကောလိပ်ပိုင် ကောလိပ်တိ အများကြီး ဖွင့်ပနာ သင်ပီးလားရပါဖို့။ ပညာသင်ချင်ရေ လူတိုင်းကို အတန်းပညာ ဘလောက်ထိ တတ်မှ၊ အေပညာကို သင်လို့ရဖို့ ဆိုပနာ အကန့်အသတ် မထားဘဲ၊ လက်တွိ သဘောတရားကိုရာ လက်တွိပြပနာ တွဲခေါ်လားကေ၊ လူတိုင်း အတတ်ပညာ တခုခုကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်လာကတ်ပါဖို့။ အေဟင့်က ဘွဲ့စာရွက်တခု ကိုင်ပနာ၊ တခုလည်း လက်တွိ မကျွမ်းကျင်ရေ ပညာတတ်ဆိုရေ လူတိနန့် ဖွဲ့စည်းထားရေ တိုင်းပြည်ထက်တော့ အများကြီး သာလွန် ပြောင်းလဲလားဖို့လို့ ယူဆမိပါရေ။
အေလောက်ဆိုကေတော့ခါ၊ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အခြေခံ အကျဆုံး ပညာရေးကို ဇာပိုင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်လေဆိုစွာကို သတိပြုမိကတ်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။
တခြား ပြောင်းလဲသင့်ရေ ဂဏ္ဍတိကိုလည်း အကြောင်းသင့်ရေခါ ရွီးပီးလားပါမေ။
အထက်က ပြောခရေ လန်ဒန်ကောလိပ်မှာ သင်ပီးနီရေ ဘာသာရပ်တိကို အောက်မှာ တွိနိုင်ပါရေ။
Previous articleငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၁)
Next articleကိုးဗဲ့ဒ်-၁၉ အိုမီခြွင် နန့် ဒဲလ်တာ ဇာကွာခြားလားလေ?